Madaxweynaha Hirshabeele oo wajahaya mooshin xilka ay uga qaadi doonaan Golaha Shacabku – Madal Furan
Hoy > Warka > Madaxweynaha Hirshabeele oo wajahaya mooshin xilka ay uga qaadi doonaan Golaha Shacabku
Madaxweynaha Hirshabeele oo wajahaya mooshin xilka ay uga qaadi doonaan Golaha Shacabku
Muqdisho (Madal Furan) – Madaxweynaha Maamul Goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ahaa Madaxdii Maamulada Goboladda Soomaaliya eek u shiray magaalada Kismaayo ayaa iminka la soo sheegayaa inay ka hor yimaadeen mowjado siyaasadeed oo sababi kara inuu xilkiisa ku waayo.
Waxaa jiray shirar is daba jog ah oo magaaladda Muqdisho ay isugu tageen qaar ka tirsan Xildhibaanada Maamulka Waare, kuwaasoo qorsheynaya inay Baarlmaankooda hor geeyaan mooshin xil ka qaadis ah oo lagu sameeyo Madaxweyne Waare.
Xildhibaanadan ayaa la sheegayaa inay dedejinayaan mooshinka xil ka qaadista Madaxweynaha Hirshabeelle ka hor inta uusan furmin kalfadhiga Golaha Baarlamaanka.
Xildhibaano ku sugan magaaladda Jowhar ayaa u yeeray Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Mudane Waare, waxayna qorsheynayaan inay hordhigaan su’aalo ay adkaan doonto inuu si fudud ugaga jawaabo.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Xildhibaanada ayaa sidoo kale la soo werinayaa inay wadaan olole ay ugu jiraan siday u heli lahaayeen saxiixa looga baahan yahay gudbinta mooshinka ridida Madaxweynaha.
SAWIRO:- W/Maaliyadda DFS oo faafisay inay ku guuleysatay sare u qaadida dakhliga 3bilood ee lasoo dhaafay